I-IUCN yeNkomfa yoLondolozo lweHlabathi: iNtshukumo eNtsha yoZinzo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » I-IUCN yeNkomfa yoLondolozo lweHlabathi: iNtshukumo eNtsha yoZinzo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • iindaba • Xanduva • Tourism • komzila Ngoku
Inkulumbuso yase-France u-Macron ethetha kuvulwa kwe-IUCN Congress
I-International Union yoLondolozo lweNdalo (i-IUCN) isonge iNgqungquthela yeHlabathi yoLondolozo lweHlabathi kule veki- kunyaka ophelileyo kunoko bekucwangcisiwe ngenxa yengxaki ye-COVID-19.
Yayiyijenda egcweleyo nenemveliso yenkomfa yemihla ngemihla eli-9 yeMbumba yaMazwe ngaMazwe yoLondolozo lweNdalo ebibanjelwe eMarseille, eFrance.
Kwakukho iintlanganiso ezi-4 ezazisenzeka ngeli xesha, zijolise ekukhuthazeni nasekuvuseleleni.
Ezi ngqungquthela zine bezinikezelwe: Ingqungquthela yaBemi Bomthonyama, iNgqungquthela yoLutsha yeHlabathi, iNgqungquthela ye-CEO, kunye neNgqungquthela yokuSebenza yeNgingqi.
Ngaphezulu kwenkomfa yeentsuku ezili-9, amalungu e-IUCN avota kwi-39 Motion, ekhethiweyo ubunkokheli obutsha, Ndaye ndavuma inkqubo elandelayo ye-IUCN yowama-2021-2024, eya kuthi ibizwa Indalo 2030: Umanyano ngokuSebenza. Ngelo xesha, kwakhona, kubanjwe iintlanganiso ezi-4 ezahlukeneyo- Ingqungquthela yaBemi Bomthonyama, i Ingqungquthela yoLutsha yeHlabathi, i Ingqungquthela ye-CEO, kwaye i Ingqungquthela yokuSebenza yaseKhaya, Zonke zijolise ekukhuthazeni nasekuvuseleleni amaqela ahlukeneyo e-IUCN asebenza nawo.
I-EcoGo yeza kwinkomfa ixhasa iziphakamiso ezi-3 - Isindululo 003 - Ukuseka iKhomishini yoTshintsho lweMozulu (okanye ukuseka iQonga leHlabathi eliSebenzayo leCrime Crisis) kwiHawai'i Conservation Alliance Foundation kunye neeLizwi zethu zokurhaxwa; Isindululo 101-Ukumisela iithagethi zolondolozo ezisekwe kwindawo esekwe kubungqina bokuba yeyiphi indalo kunye nabantu ekufuneka beyiphumelele, ixhaswe yiWILD Foundation kunye neYellowstone kwiYukon Conservation Initiative; Isindululo 130 -Ukomeleza indima yokhenketho ezinzileyo kulondolozo lwendalo kunye nokomelela koluntu, kuphakanyiswe yi-WCPA (ikhomishini ngaphakathi kwe-IUCN) yeQela leNgcali yezoKhenketho neNdawo eziKhuselweyo. Zombini zidlulile, njengoko kunokubonwa ngu iziphumo zovoto.
Pamela kwiAix en Provence
Isindululo se-130 sigubungela ukudala uKhenketho oluZinzileyo njengesihloko kunye nokudibanisa imisitho yokhenketho esekwe kwindalo kunye nemisebenzi kwiinkomfa ezizayo nakwiinkomfa ze-IUCN, ifuna ukwenziwa kweqela elisebenza phakathi kwekhomishini elijolise kwindima yokhenketho oluzinzileyo kulondolozo lwendalo kunye nokomelela koluntu, kwaye ikhuthaza ezinye iikhomishini zokubandakanya ukhenketho oluzinzileyo kwimizamo yabo yexesha elizayo. I-WCPA kunye nabo bonke abaxhasi baye bavuyisana noku.
I-Motion 101 ibilixesha elide isenziwa, kwaye idlulile ngenxa yemizamo engapheliyo yeVance Martin kunye neqela lakhe. Njengoko Utshintsho lwemozulu luqhuba ngokubaluleka kokuthatha amanyathelo, Olu luhlobo lwezikhokelo ezifunekayo ukukhusela indalo-isitshixo ekusindeni.
UJoshua Joshua Shapiro, uJessica Hughes, kunye noPamela Lanier kwisidlo sangokuhlwa seCEC
Isindululo 003 saxoxwa kakhulu. Abacebisi bafuna iKomishini yoTshintsho lweMozulu eyenziweyo, kodwa ekuhlaziyweni ngumzimba wokuphononongwa kwe-IUCN, ulwimi lwatshintshwa lwaba neqela elisebenzayo, kunokuba kwenziwe ikhomishini. Funda impendulo yethu "Yokuntywila." Apha. Oko Ulwimi lutshintshiwe phantsi kohlaziyo olwenziweyo "Ukuseka iQonga leHlabathi eliSebenzayo leCrime Climate" okanye ukudala iKhomishini. Isindululo esipasisiwe kwingxoxo ye-8 kunye neyokugqibela kunye nevoti yenkomfa, nangona ukuba loluphi uhlobo oluza kuthatha alukaziwa.
IUCN ikwavumile nge Manifesto entsha Kwithuba leminyaka emine ezayo kugxilwe ekubuyiseleni i-COVID-19 kunye nokumisa ilahleko yendalo.
Isango elitsha le-AC Hotel Atlanta Airport Gateway